प्रवाश – Page5– Google pati
बुढो बनाउने ‘फेसएस’ एकदिनमै १० करोड डाउनलोड
मानिस जन्मजात नै जिज्ञासु प्राणी हो। उसलाई आफ्नो उमेर, अनुहारको रङ देखिने आकारको बारेमा ६० वर्षपछि कस्तो देखिन्छौ भन्दा सम्भव होला त बताउन? तर, सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै मानिसको बुढ्यौलीपनको अनुभूति दिलाउने तस्बिर निकालिदिने एप्लिकेशन फेसएप ले संसारभर तरङ्ग ल्याइदिएको छ। फेस एप नामक उक्त एप्लिकेशन सार्वजनिक भएको केही घण्टामै मानिसहरुले...बाँकी
बिल गेट्सलाई उछिन्दै दोश्रो धनी बने बर्नाड अर्नल्ट
सात वर्षको अवधिसम्म ब्लुमबर्गको अर्बपतीको सूचीमा दोश्रो स्थानमा रहेका धनाढ्य व्यापारी बिल गेट्स तेश्रो स्थानमा पुगेका छन् । उनलाई उछिन्दै दोस्रो स्थानमा उक्लने व्यापारी हुन् बर्नाड अर्नल्ट । फ्रान्सका लक्जरी सामान निर्माता कम्पनी एलभीएमएचका अध्यक्ष तथा सिइओ रहेका उनको सम्पत्ती ह्वात्तै बढेसँगै बर्नाडले माइक्रोसफ्टका मालिकलाई उछिनेका हुन् । यस सूचीमा...बाँकी
भारतको गुजरातस्थित महिसागरमा एक विषालु सर्पले ६० वर्षका वृद्धलाई डस्यो । सर्पले डसेपछि ती वृद्धले त्यसलाई समाते डसेपछि वृद्धले सर्पलाई समाते र दाँतले टोके । विष फैलिएका कारण पहिले सर्पको मृत्यु भयो त्यसपछि वृद्धले पनि अन्तिम सास फेरे । गुजरातको वडोदार नजिकै पर्वत गाला नामका वृद्ध खेतमा काम गरिरहेका थिए...बाँकी
नयाँ आर्थिक वर्ष (भोलि) देखि इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १३ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शूल्क (टीएससी) लगाउने भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा पर्ने भएको हो । भोलिदेखि इन्टरनेटको विलिङमा १३ प्रतिशत थप गरेर त्यसमा भ्याट थपिने छ। यसले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अहिले तिरिरहेको मूल्यमा...बाँकी
लुकिरहेको अपराधीले ठुलो आवाजमा पादेपछि पक्राउ
अमेरिकाको मिसूरीमा प्रहरीबाट भागिरहेका एक आरोपितले लुकेको ठाउँमा पादेपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ । लागूपदार्थ बोकेका ती अपराधीलाई प्रहरीले खोजिरहेको थियो । उनले लुकेकै ठाउँमा चर्को आवाजमा पादे । ‘पक्राउपूर्जी जारी भएको व्यक्तिलाई प्रहरीले खोजिरहेको बेलामा चर्को गरी पाद्दा लुकेको ठाउँ पत्ता लाग्छ अनि तिम्रो दिन पक्कै पनि...बाँकी
फेसबुकमा यदि कुनै फोटोलाई जुम गर्नका लागि दुईपटक ट्याप गर्नुहुन्छ भने तपाईंले अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । किनभने फेसबुकले इन्स्टाग्राममा भएको फिचर अब फेसबुक एपमा सुरु गरेको छ । यसको घोषणा कम्पनीले पछिल्लो महिना नै गरेको थियो तर अब प्रयोगकर्ताले यो नयाँ फिचर प्राप्त गर्न थालेका छन् ।। वास्तवमा,...बाँकी
आक्रमणमा परी सात बालबालिकाको मृत्यु
सिरियाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा यसै साता भएका आक्रमणमा कम्तीमा सात जना बालबालिकाको मृत्यु भएको राष्ट्रसंघका एक प्रवक्ताले बताएका छन्। राष्ट्रसंघका महासचिवका प्रवक्ता फरहान हकले माहम्बेल गाउँमा गत सप्ताहान्तमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा सात बालबालिकाको मृत्यु भएको युनिसेफले जनाएको बताए। हकले यसै वर्ष त्यस क्षेत्रमा भएका विभिन्न आक्रमणमा कम्तीमा १४० जना बालबालिकाको...बाँकी
दुनियाकै एकमात्र बालिका जसलाई चोट लाग्दा पनि दुख्दैन !
तस्वीरमा देखिएकी यी बालिका देख्नमा त अरु सामान्य बालबालिका झैँ लाग्छिन् । तर यिनी यस्तो रोगबाट पीडित छिन् जसका कारण उनलाई न त निद्रा लाग्छ, न त भोक नै लाग्छ । जिउमा जति ठूलो चोट लागोस्, उनलाई फिटिक्कै दुख्दैन । डाक्टरहरुले ओलिविया फ्रान्सवर्थलाई बायोनिकको उपाधि दिएका छन् भने उनकी आमाले...बाँकी